Ziyini izimakethe zekusasa? | Ezezimali Zomnotho
Ngokuqiniseka okukhulu ukuthi kwesinye isikhathi uzobe uzwile ngezimakethe zesikhathi esizayo futhi kungenzeka ukuthi uke walingeka ukuba wenze imali ngale nsimbi. Kodwa-ke, mhlawumbe ukungazi lo mkhiqizo wezezimali kukwenze wahoxa ekwenzeni imisebenzi eyiyo ehluke kakhulu kuyini ukuthengwa nokuthengiswa kwamasheya emakethe yamasheya. Ngakho-ke ukuthi kusukela manje akukho okungcono okuzokwenzeka kuwe ukwedlula ukwazi ukuthi le modeli yokutshalwa kwezimali iqukethe ini.
Yebo, izimakethe zekusasa ngokuyisisekelo ukuthuthukiswa kwezinkontileka zokuthengwa noma ukuthengiswa kwezinto ezithile esikhathini esizayo. Lapho kufinyelelwa esivumelwaneni nentengo yamanje, inani kanye nenani usuku lokuphelelwa isikhathi. Okwamanje iyatholakala ezimakethe zamasheya, kodwa ungakhohlwa ukuthi ingathinta ingxenye enhle yezimpahla zezimali ezilawulwa ezimakethe zezimali. Njengokunye okufanele wenze ukonga kube nenzuzo kusuka manje kuqhubeke.
Izimakethe zekusasa zifana kakhulu nokuthenga nokuthengisa amasheya emakethe yamasheya, kepha akuyona into efanayo. Uma ufuna ukutshala imali ngalo mkhiqizo wezezimali okhethekile, kufanele wazi ngaphezu kokunye ukucatshangelwa ukuthi kubhalwe ngezikhathi lapho izimakethe zamasheya zivaliwe. Ngale ndlela, uzobe usesimweni sokusizakala ukunyakaza lokho kwenzeka kwesinye isikhathi sosuku lapho ungeke ukwazi ukwenza imisebenzi yakho ekuthengiseni okuguquguqukayo. Ngale ndlela, ungazuza ngokushicilelwa kwemibiko, izifundo noma amanye amathuluzi wokuhlaziya akhishwa ngokushintshaniswa kuvaliwe.
1 Imakethe yesikhathi esizayo: imvelaphi
2 Utshalomali olususelwa ekuqageleni
3 Imakethe entsha yesikhathi esizayo
4 Ukwakhiwa kwezinkomba ezintsha
5 Ocingweni bese ubeka izikhundla
6 Ngemininingwane ethile
Imakethe yesikhathi esizayo: imvelaphi
Lesi sigaba sezimakethe zezezimali sasinomsuka waso ekupheleni kwekhulu le-XNUMX futhi singumthombo wokubhekiswa kuso izinto zokusetshenziswa. Phakathi kwalabo abavelele ngaphezu kwakho konke ikhofi, ukolweni, uwoyela kanye nobhontshisi, phakathi kokunye okuhambisana kakhulu. Akumangalisi ukuthi kubhekwe njengomkhiqizo osondelene kakhulu nalesi sigaba sezimpahla zezimali, ngakho-ke kuyinhlekisa engxenyeni enkulu yabatshalizimali abancane nabaphakathi. Kuze kube seqophelweni lokuthi abafakiwe kwizikhundla zabo zokutshala imali.
Ngakolunye uhlangothi, ngeke ikhohlakale nganoma yisiphi isikhathi ukuthi iyimakethe ebonakala ngezikhathi zokunikezwa kokuvuna (isivuno) nangamanani entengo eguquguqukayo unyaka wonke, okwenza umsebenzi ungakhangi kangako. Leli qiniso lenza kube yinto ejwayelekile kubo ukuthi babalwe ezimakethe zesikhathi esizayo emhlabeni wonke. Lapho ungakwenza kube nenzuzo ngokuya ngokuncamelayo onakho ngezikhathi ezithile futhi sengathi ngamanani wemakethe yamasheya.
Utshalomali olususelwa ekuqageleni
Lesi sigaba sezimakethe zezimali sibonakala ngengxenye yaso ephezulu yokuqagela, lapho kunemali eningi ongayithola ekusebenzeni okwenziwayo. Yize futhi kukushiyela ama-euro amaningi lokho okushiya endleleni ngenxa yezici ezikhethekile zale mpahla yezezimali ekhetheke kakhulu engxenyeni enhle yabatshalizimali. Ngakolunye uhlangothi, lezi izimakethe ezingaphansi kokuhluka kwamanani aphezulu futhi ngenxa yalokho, abatshalizimali bathatha ubungozi benethemba lokuthola izinzuzo zesikhathi esizayo. Njengomehluko omkhulu maqondana nokusebenza kwendabuko yemakethe yamasheya.
Esinye isici okufanele usicabangele kulesi sigaba sokusebenza kwemakethe yamasheya ukuthi awukho esimweni kuphela sokwenza imisebenzi ezindabeni zezolimo kepha futhi nasezimpahla zezimali, amaminerali, izimali, njll. Futhi okunye ukucaciswa okungafanele kunganakwa kusukela manje kuqhubeke. Akukho okunye ngaphandle kokuthi ukuvalwa kwemali akudingeki kwenzeke ngesikhathi sokuvuthwa, kepha ukuthi le nhlangano isivele iyidlanzana phakathi kwabatshalizimali abancane nabaphakathi. Kunoma ikuphi, kungukutshalwa kwezimali okuyinkimbinkimbi kakhulu kunezinye futhi kufakwe kakhulu kulokho okubizwa ngemikhiqizo ethathwe kokunye. Lapho ubungozi bukhulu kakhulu kunabanye.
Imakethe entsha yesikhathi esizayo
Kunoma ikuphi, izindaba ezinhle zezintshisakalo zakho zitholakala eqinisweni lokuthi kuvuleka amathuba amasha okutshala kulo mkhiqizo kusukela manje kuqhubeke. Ngoba empeleni, kusukela ngonyaka odlule, kungenzeka ukuthi kusetshenziswe ikusasa lemali ngoba iMakethe Esemthethweni Yezinketho Nezikhathi Ezizayo Zezimali eSpain (MEFF) izokwethula izinkontileka ezintsha zekusasa ngezimali ngaphansi kwegama lika I-FX Rolling Spot Ikusasa.
I-MEFF iyimakethe ehlelekile elawulwa, ilawulwa futhi igadwe yiNational Securities Market Commission (CNMV) kanye noMnyango Wezomnotho waseSpain lapho kuthengiswa khona izinto ezahlukahlukene zezimali. Lapho kufakwa khona amakilasi ahlukahlukene wesikhathi esizayo lapho ungavula khona izikhundla ukwenza imali yakho izuze nganoma yisiphi isikhathi. Ngokusetshenziswa kwamakhomishini afana kakhulu nalawo akhiqizwe ekuthengweni nasekuthengisweni kwamasheya emakethe yamasheya.
Ukwakhiwa kwezinkomba ezintsha
Kusukela ngonyaka odlule, i-BME isiqalile ukusabalalisa, ngokusebenzisa abahlinzeki abakhulu bemininingwane yemakethe yamasheya, izinkomba zokungazinzi kanye namasu izinketho ku-Ibex 35. Lawa ma-indices, azoshicilelwa ekupheleni kweseshini ngayinye, enza sikwazi ukukala ukungabi bikho kwemakethe ngokuphelele futhi kukhombise ukusebenza kwamasu athile okutshala imali ngemikhiqizo edayiswa ku-MEFF, emakethe evela kwa-BME. Njengethuba elisha lokutshala imali ngamasu ahlukile ngamamodeli obusebenza ngawo kuze kube manje. Lezi ngezinye zezinto ezifanele kakhulu onazo.
Inkomba I-VIBEX yinkomba ye- kusho ukungazinzi emakethe yaseSpain. Kukala ukuguquguquka okusikiselwe kwezinketho zenkomba ekhethiwe yemali engenayo eguquguqukayo, i-Ibex 35 yokuvuthwa kwezinsuku ezingama-30.
Inkomba I-BEX 35 SKEW ikhombisa ukuvela kwe simo esishubile skew kuzinketho ze-IBEX 35. I-skew esishubile ichazwa njengokwehluka kokushintshashintsha kwenani ngalinye lokuvivinya umzimba. Ngomlingiswa ocacile ocacile futhi onengozi enkulu ekusebenzeni okwenziwa ngabatshalizimali.
Ocingweni bese ubeka izikhundla
Inkomba IBEX 35 THENGA iphinda isikhundla sokuthenga ngokuzayo kwe-IBEX 35 nokuthengiswa njalo kwezinketho zeCall, ngakho-ke, kuyisu elifana nokuthengwa kwe- Ibhasikidi le-IBEX 35 ngemali engenayo eyengeziwe evela ekuthengisweni kwenketho.
Inkomba IBEX 35 BHALA iphinda ukuthengisa okuqhubekayo kwe- Faka izinketho. Kuyisu le-bullish ngenzuzo enqunyelwe ku-premium efakiwe nangokulahlekelwa okungenamkhawulo.
Inkomba IBEX 35 UKUVIKELA iphinda isikhundla sokuthenga esikhathini esizayo se-IBEX 35 esihlotshaniswa nokuthengwa okungapheli kwezinketho ze-Put. Kuyisu le-bullish elinokulinganiselwa kokulahleka nenzuzo engenamkhawulo, elilingana ne- a Ukuthengwa kwezingcingo. Iziphatha kahle kakhulu ngokuhamba okungazelelwe kwenkomba, inokuziphatha okubi ngokunyakaza okubushelelezi. Noma ngeze, ukuguquguquka kwayo kungenye yezimpawu zayo ezibonakala kakhulu kunoma yiliphi isu lokutshala imali.
Inkomba IBEX 35 UKUDAYISWA KWE-STRANGLE Iphinda ukuthengiswa okuqhubekayo kwezinketho zePut and Call. Ihambisana necebo elingathathi hlangothi (hhayi elenzayo noma ele-bearish) lelo lindela ukuguquguquka okuphansi nokuthi umhlomulo ulinganiselwe kuphrimiyamu ekhokhiwe. Njengoba kunikezwe ukuthi ukusebenza kwayo kumakwe ukungazinzi, kuyinkomba enokuhlobanisa okuphansi kakhulu ne-IBEX 35®, ngaleyo ndlela kwandise ukwehluka kwephothifoliyo.
Noma yikuphi kwalokhu kubhejwa ezimakethe zamasheya sekuvele kungenziwa ngaphandle kwezinkinga ezeqile ezivela ebhizinisini elijwayelekile lasebhange. Njengenye yezindlela ezinhle ezivelile ezinyangeni ezedlule futhi ezingasetshenziswa ukwengeza noma yiluphi uhlobo lotshalo-mali. Noma kugcinelwe iphrofayili ye- umtshali zimali onolaka nokuthi unolwazi olukhulu ngezimakethe zezimali. Ukube bekungenje, bekungaba ngcono ukuthi uyeke ukwenza le misebenzi ngoba ungalahlekelwa yimali eningi ekuhambeni ngakunye okwenziwe.
Ngakolunye uhlangothi, ngokusatshalaliswa kwalezi zinsimbi ezintsha, ngokusebenzisa amasu ahlukahlukene wokutshala imali nolwazi oluthe xaxa, uzoba namasu ahlukahlukene wokusizakala ngokuntengantenga kwemakethe. Ikakhulukazi onyakeni ofana nowamanje lapho ukungaqiniseki okudalwe yimakethe yamasheya Kukhulu kunakuqala futhi kungenzeka ungadingi ukushintsha umkhiqizo wakho wezezimali ukwenza izimpahla zakho zenze inzuzo ezinyangeni eziyishumi nambili ezizayo noma ngisho nesikhathi sokuhlala eside ngokwengeziwe.
Enye yeminikelo yayo emikhulu ilele ekutheni kusukela manje kuqhubeke uzoba nezinketho eziningi lapho ungatshala khona imali. Ngaphandle kokukhawulela ekuthengeni nasekuthengiseni amasheya ezimakethe zamasheya. Ukuze ukwazi ukukhetha phakathi kwamasu ahlukene okutshalwa kwezimali, kusuka kulawo asuselwa ekuguquguqukeni kuya kulawo ahlinzekwa kusuka ezintweni ezihlukile zokusetshenziswa ezibhalwe ezimakethe zezezimali. Ngokusebenzisa imodeli yokutshala imali ehweba nganoma yisiphi isikhathi sosuku, noma kwezinye izimo ebusuku nangezimpelasonto. Ukuze imakethe yamasheya kungabi ukuphela kwesiphakamiso sokutshala imali.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Imikhiqizo yezezimali » Ziyini izimakethe zekusasa?